राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली झण्डै १ बर्षपछि शुक्रबार फर्कदैछ । » Mero Khel
१४,मंसिर,२०७७ ( Sunday, November 29, 2020 ) 7: 53 am
जित भन्दा महत्वपूर्ण नयाँलाई अवसर !
MeroKhelPosted on २८,कार्तिक,२०७७ November 13, 2020 २ हप्ता पहिले
काठमाण्डौं । नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली झण्डै १ बर्षपछि शुक्रबार मैदान फर्कदैछ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीपछि बंगलादेशसंग मैत्रीपूर्ण खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाल मैदान फर्कन लागेको हो । पछिल्लो समय १९ नोभेम्बर २०१९ मा कुवेतविरुद्ध फिफा विश्वकप छनोट अन्तर्गत भुटानमा घरेलु प्रतियोगिता खेलेपछि नेपाली टोली प्रतियोगिता र अभ्यास विहिन थियो ।
बंगलादेशको ढाकास्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा हुने दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल मध्ये पहिलो खेलमा नेपालले शुक्रबार साँझ ५ बजे बंगलादेशको सामना गर्नेछ । मैत्रीपूर्ण खेल्न नेपालमा एक साता मात्र अभ्यास गरेर एकसाता अघि बंगलादेश गएको टोली पर्याप्त तयारीबिना मैदान उत्रन लागेको छ । उता विपक्षी तथा घरेलु टोली बंगलादेश पनि कोरोनाको महामारीपछि नेपालविरुद्धको खेलबाट नै फुटबलमा फर्कन लागेको हो । यी दुबै टोली झण्डै १ बर्षपछि पहिलोपटक मैदान उत्रदैछन् भने २ बर्षपछि एक आपसमा भिड्दैछन् । अघिल्लो बर्षको नोभेम्बरदेखि नेपाल र बंगलादेश दुबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता विहिन छन् भने दुबै टोली पछिल्लो पटक २०१८ को साफ च्याम्पियनसिपमा खेलेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल कहाँ र कसरी हेर्ने ?
सन् २०१८ मा आयोजना भएको साफ फुटबलमा बंगलादेशको सामना गरेको नेपालले समग्रमा तेश्रो पटक बंगलादेशविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल्न लागेको हो । नेपालले यस अघि बंगलादेशसंग दुईवटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलेको छ। सन् १९९५ मा बंगलादेशमा र आजभन्दा ८ बर्ष अघि अर्थात सन् २०१२ मा दशरथ रंगशालामा यी दुई टोली खेलेका थिए । यसअघिका दुबै मैत्रीपूर्ण खेलमा विर्सनलायक नतिजा निकालेको नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण २–१ ले गुमाउँदा दोस्रो मैत्रीपूर्णमा पनि बराबरीमा चित्त बुझाएको थियो ।
तयार र उत्साहित नेपाल
गत बर्ष चैत्र महिनादेखि कोरोनाको जोखिम न्युनिकरणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन तथा खेल क्षेत्रमा लगाईएको प्रतिबन्धपछि नेपाली टोली प्रतियोगिता मात्र हैन अभ्यास विहिन समेत छ । महिनौंदेखि व्यक्तिगत अभ्यासको भरोसामा रहेका खेलाडीहरु छोटो तयारी र कोरोना कहरकाबीच बंगलादेश पुगेका छन् । यस्तो अबस्थामा पनि नेपालले घरेलु टोलीलाई माथ दिने योजना बनाएको छ ।
‘म खेललाई लिएर निकै उत्सुक छु, मलाई ७ महिनापछि फुटबल फर्किएकोमा खुसी छ ।’ नेपाली टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले भनेका छन् ।
उनले कोरोनाको महामारीपछि खेल्न सोचे अनुसार सहज नभएको बताएका छन् भने खेलाडीहरुलाई मानसिक र शारीरिक रुपमा तयार हुन समय लाग्ने, तर खेल्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘बंगलादेश र हाम्रो अवस्था लगभग उस्तै छ’, किरणले भने, ‘उनीहरु जसरी उत्कृष्ट खेलका लागि तयार छन्, ७ महिनापछि हुन लागेको खेलका लागि म र मेरो टिम पनि तयार छ ।’
यस्तै टोली भ्रमणमा जानु अघि प्रतियोगिता जित र हारको नतिजा भन्दा नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने अवसर रहेको बताएका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बंगलादेशबाट नेपाली समर्थकहरुलाई चुनौतीको सामना गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘टिम सामनाका लागि तयार छ, हामीलाई यो चुनौती स्वीकार्य छ ।’
फिफा विश्वकप २०२२ अन्तर्गत छनौट चरणको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल प्रभावकारी हुने महर्जनले बताए ।
बंगलादेशविरुद्ध नेपालका केही मुख्य खेलाडी कोरोना संक्रमणका कारण टिममा हुनेछैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रशिक्षक महर्जनले नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिनेछन् । महर्जनले ८ नयाँ खेलाडीलाई समेटेर टिम तयार बनाएका छन् ।
‘म संग केही भरपर्दा खेलाडी छैनन्, त्यसैले बंगलादेशसंग खेल्नु भन्दा सुरुवाती ११ छान्नु मेरा लागि कठिन छ’, प्रशिक्षक महर्जन भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी सकारात्मक नतिजाको पर्खाइमा छौं ।’
बंगलादेशी भुमिमा सफल प्रशिक्षक मानिएका महर्जनसंग ८ नयाँ खेलाडीलाई मौका दिने तथा चिन्ने र उनीहरुकै भरमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना हुनेछ ।
नयाँलाई अवसर, कुन खेलाडीको सम्भावना कति ?
नेपालमा करिव १ हप्ता र बंगलादेशमा केहीदिनको मात्र तयारीको मौका पाएको नेपाली टिमलाई आफू अनुकुल नतिजा निकाल्न कठिन तथा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउने फुटबल जानकारहरु यसपटक टिममा परेका ८ नयाँ अनुहारले खेल्ने मौका पाउने बताउँछन् । केही अनुभवी र केही महत्वपूर्ण खेलाडीहरुले कोरोना संक्रमण र अन्य कारण भ्रमण गुमाएपछि नेपालसंग जित भन्दा पनि स्तरीय प्रदर्शन र नयाँ खेलाडीलाई मौका दिदै प्रतिभा निखार्ने योजना हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाब छ । बिभिन्न कारणले राष्ट्रिय टिमका ८ सदस्यले भ्रमण गुमाएपछि केही अनुभवी र केही नयाँ खेलाडीको तालमेलमा नेपालले नतिजा आफू अनुकुल हात पार्नेमा विश्लेषक सञ्जिब मिश्र पनि विश्वस्त छन् ।
घरेलु फुटबल तथा उमेर समुहको खेलमा शशक्त प्रस्तुती दिएका विकाश खबास, एरिक बिस्ट, सेसेहाङ आङ्देम्बे , दर्शन गुरुङ, पुजन उपरकोटी लगायत खेलाडीले खेल्ने मौका पाउन सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘टोलीमा नपरेका विशाल राई ,देबेन्द« तामाङ, रोहित चन्दको स्थानमा विकाश खबास, एरिक बिस्ट, सेसेहाङ लगायतले मौका पाउनेछन्’, मिश्र भन्छन्, ‘मिडफिल्डमा केही कमजोरी देखिएला, तर पुराना खेलाडीको झल्को दिने प्रदर्शन नयाँ खेलाडीबाट समेत पाइने छ । किनकी उनीहरु घरेलु फुटबलमा शानदार प्रदर्शनका लागि चिनिएका थिए ।’
मिश्रका अनुसार टिममा पुराना खेलाडी नहुँदा सेन्टर मिड र सेन्टर डिफेन्समा तालमेल अभाव हुन सक्छ, तर सुवास गुरुङ, एरिक बिस्ट, सेसेहाङ आङदेम्बे, तेज तामाङ लगायत खेलाडीलाई विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार छन् । मिडफिल्डमा बिक्रम लामा पनि प्रयोग हुन सक्छन् ।
प्रशिक्षक महर्जनका विश्वासिला र पहिलो रोजाईका लेफ्ट ब्याक सुमन अर्यालसंगै राइट ब्याक विकाश खबासको सम्भावना लगभग पक्का छ । यसबाहेक अजित भण्डारी, सरोज दाहाल र छिरिङ गुरुङ पनि रक्षपंतिमा मौका पाउने खेलाडी बन्न सक्छन् । अनुभवि बिक्रमले पूर्ण रुपमा डिफेन्समा ड्युटी पाए बिक्रमसंगै अनन्त तामाङ, बिकास र सुमनले पहिलो रोजाईमा रक्षापंति सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन् ।
मिडफिल्डमा नेपालका लागि सुजल श्रेष्ठ र अन्जन बिष्ट प्रमुख हतियार हुन् । उनीहरु दुबैले जुनसुकै बेला फर्वाड लाइनमा तालमेल मिलाउन सक्छन् । उनीहरुसंगै एरिक बिष्टले डेब्यूको मौका पाउन सक्छन् । यस्तै रवि पासवान र दर्शन गुरुङ पनि महर्जनका लागि विकल्प छन् ।
यस्तै फर्वाड लाइनमा महर्जनले सँधै विश्वास गरेका नवयुग श्रेष्ठ छन् । उनले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा सुरुवाती ११ मा मौका बनाउने पक्का छ । यस्तै अनुभवी विंगर भरत खबासलाई पनि पहिलो रोजाइमा राख्नु बाहेकको विकल्प महर्जनसंग हुनेछैन । आइपरेको खण्डमा भरतले फर्वाड लाइनको अभाव समेत पुरा गर्न सक्ने र मिडफिल्डमा पनि उत्कृष्ट खेल्न सक्ने विश्वास मिश्रको छ । भरत राष्ट्रिय टिममा सर्वाधिक गोलको किर्तिमानबाट नजिकै रहेका कारण पनि उनलाई प्रशिक्षकले धेरै विश्वास गर्न सक्छन् । भरतले अहिलेसम्म नेपालका लागि ५६ खेल खेल्दै १० गोल गरेका छन् । जर्ज प्रिन्स फर्वाड लाइनको बिकल्प हुनेछन् भने विमल राना पनि तयार रहनेछन् । गोलरक्षक तथा कप्तान किरण चेम्जोङले पुरै खेल नखेलेको अवस्थानमा विशाल श्रेष्ठ र दीप कार्कीलाई पनि प्रशिक्षक महर्जनलले एकएक खेलमा मौका दिन सक्नेछन् ।
यतिहुँदा हुँदै पनि मिश्र बंगलादेशविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेललाई नयाँ खेलाडीहरुको प्रयोगले उत्साहित बनाउने बताउँछन् ।
‘नयाँ खेलाडीले आफूलाई प्रमाणित गर्न स्वभाविक प्रदर्शनमा जोड दिनेछन्, त्यसैले पनि नेपालको प्रदर्शन अपेक्षाकृत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ’, मिश्रले भने ।
प्रशिक्षक महर्जनले सरोज दाहाल, तेज तामाङ, छिरिङ गुरुङ जस्ता राष्ट्रिय टिममा उच्च प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका खेलाडीलाई पनि परिक्षण गर्ने सम्भावना छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच हालसम्म भएका १९खेलमा नेपाल धेरैपटक पराजित भएको छ । नेपालले मात्र ६ खेलमा जित निकाल्दा १ खेलमा बराबरी खेलेको छ । बाँकी खेल (१२ पटक) नेपाल बंगलादेशसंग पराजित भएको छ । नेपालले अहिलेसम्म बंगलादेशविरुद्ध १९८४ मा दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ५–० गोल खानुनै फराकिलो अन्तरको पराजय हो । नेपालले पछिल्ला ५ खेलमा बंगलादेशलाई ३ पटक पराजित गरेको छ । २०११, २०१३ र १०१८ को साफमा नेपालले बंगलादेशलाई हराएको थियो । २०१३ को एसियन कपमा नेपाल पराजित भएको थियो । २०१२ को मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल बराबरीमा रोकिएको थियो । नेपालले पछिल्लो पटक बंगालदेशसंग साफ च्याम्पियनसिपमा २–० को जित निकालेको थियो ।
विश्व फुटबलमा बंगलादेश र नेपाल एकै लेभलका टिम हुन् । त्यसैकारण मानषिक र शारीरिक रुपमा नेपाल दबाबमा हुनेछैन । कोरोनाका कारण नेपालले अभ्यासको मौका पाएको छैन भने बंगलादेशको अवस्था पनि उस्तै छ । बंगलादेशलाई घरेलु भुमी एडभान्टेज हुनेछ, तर नेपालले बंगबन्धु रंगशालामा खेलेका प्रायः खेलमा घरेलु भुमीमा भन्दा अब्बल नतिजा हात पारेको छ ।
प्रायः खेलाडी व्यक्तिगत अभ्यास र छोटो क्लोजक्याम्पकैबीच बंगलादेश पुगेका छन् । छोटो तयारीमा नै उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने बाद्यता छ । त्यसैले नेपाली टोलीका लागि बंगलादेशविरुद्धको खेल कोरोनापछि फुटबल फर्किएको सन्देश दिन र नयाँ खेलाडीलाई परिक्षण गर्न भन्दा महत्वपूर्ण अरु नभएको फुटबल जानकारहरु बताउँछन् ।
बंगलादेशविरुद्ध खेल्ने नेपाली टोली
गोलरक्षकः किरण चेम्जोङ, विशाल श्रेष्ठ, दीप कार्की
डिफेन्डरः अजित भण्डारी, अनन्त तामाङ, विकास खवास, दिलेन लोक्ताम, छिरिङ गुरुङ, सुमन अर्याल, सरोज दाहाल, रन्जित धिमाल
मिडफिल्डरः अन्जन विष्ट, एरिक विष्ट, विक्रम लामा, रवि पासवान, सेसेहाङ आङदेम्बे, सुभास गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, पुजन उपरकोटी, दर्शन गुरुङ
यो पनि पढ्नुहोस्ः खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति
Tagsfootball players nepali team अन्तर्राट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल कोभिड–१९ कोरोना भाइर नोभेम्बर मैत्रीपूर्ण राष्ट्रिय पुरुष
Previous Postखेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमतिPrevious Post
Next Post३५ वर्षपछि ईङ्गल्याण्डले आयरल्याण्डलाई फुटबलमा हरायोNext Post
MeroKhelPosted on ८,मंसिर,२०७७ November 23, 2020 ६ दिन पहिले
MeroKhelPosted on ४,मंसिर,२०७७ November 19, 2020 १ हप्ता पहिले
MeroKhelPosted on ३,मंसिर,२०७७ November 18, 2020 २ हप्ता पहिले
डर्टमण्ड हार्यो, बार्यन र लेइप्जिग विजयी
सासुओलोलाई पराजित गर्दै इन्टर दोस्रो स्थानमा
१३औं सागको खर्चको हिसाब विवरण भोलि सार्वजनिक हुने
भारत र अष्ट्रेलिया दोस्रो खेल खेल्दै
Home>फिचर समाचार>जित भन्दा महत्वपूर्ण नयाँलाई अवसर !